Webtrends 9 natolotra: mihoatra ny andrasana rehetra | Martech Zone
Navoaka ny Webtrends 9: mihoatra ny zavatra antenaina rehetra
Talata, Aogositra 4, 2009 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Tamin'ny volana aprily 2009, ny jeneraly Webtrends Alex Yoder dia nijoro nanoloana ireo mpanjifany, ny gazety, ny mpandinika ary ny birao ary nanolo-tena fa hanome vina traikefa vaovao momba ny mpampiasa i Webtrends. Nametraka ny fanontaniana aho… Webtrends ve namorona fotsiny ny tenany sa efa teraka indray?
Tonga ny valiny androany… ary manana izany i Alex sy ny ekipany nanolotra... Webtrends is teraka indray!
Afaka nanararaotra nifandray tamina interface Webtrends taloha aho ary toa folo taona lasa izay (mety ho efa!). Ilay interface vaovao miaraka amin'i Webtrends 9 kanto, tsotra, madio ary manana fampiasa miavaka. Mahatsiaro ho toy ny hoe nipetraka tao amin'ny Mercedes vaovao ianao.
Vantany vao misitrika antsipirihany amin'ny kaonty nomena ianao dia afaka manao izany mivezivezy tsara na amin'ny tatitra na tatitra, kaonty kaonty, na safidio ny fomba fijery samihafa (ambony ankavanana):
Ny fomba fijery dia manana ny mampiavaka azy manokana, toa ny ny fomba fijery ny tantara… Izay misintona ny angon-drakitrao ary mametraka azy amin'ny teny anglisy mahazatra. Ity dia singa maranitra amin'ny tatitry ny mpanatanteraka:
Misy fijery latabatra… izay azonao atao ara-bakiteny dika mitovy ary apetaho ary tazomy ny famolavolana sela:
Misy roa fiovana revolisionera, na izany aza, nahasarika ny saiko izany.
Ny endri-javatra voalohany dia tokony ho endrika iray amin'ny arsenalin'ny fikambanana rehetra raha toa ka maniry ny hanamora ny fampidirana ny sehatra misy azy ireo izy ireo. Io endri-javatra io dia ny fahaizana manindry fizarana ary mamerina ny angon-drakitra tena izy ao Excel, XML na alao ny tena REST API antso! Oay!
Ny endri-javatra HUGE izay inoako fa hampihozongozona ny fototry ny tontolon'ny Analytics dia ny fahaizana overlay ny RSS RSS rehetra ao amin'ny data! Niova tanteraka ny varotra an-tserasera tato anatin'ny taona vitsivitsy ary misy ny fiatraikany mivantana amin'ny statistika an-tserasera ny metrika ivelan'ny tranonkala. Ny fahaizana manarona a Fikarohana ao amin'ny Twitter, Vaovao, ny bilaoginao, ny toetrandro… tsy misy farany ny lisitra!
Ny interface interface vaovao dia novolavolaina tamin'ny azy ireo API - hetsika izay manome fahafaha-manao tsy mampino amin'ny famolavolana fomba vaovao, tatitra vaovao ary fiasa vaovao.
Kudos ho an'i Alex sy ny ekipany ao amin'ny Webtrends. Ny mpanjifa rehetra dia nafindra tany amin'ny interface vaovao androany sy ny fanehoan-kevitra manana tsara be.
Voalazako ve fa mandeha amin'ny iPhone koa izy io?
PhoneGap: Fampivoarana ny fampiharana an-tserasera Cross-Platform